Ningbo, Hangzhou, namaviri purezidhendi Chamber of Commerce vakabata basa musangano - China Yuyao Hengwei Hose Clamp
At 16:00 musi May 6, 2014, Ningbo, Hangzhou, namaviri purezidhendi hofisi musangano Chamber of Commerce rakaitirwa Ningbo Investment Co., Ltd. Lan House, kuti telephoto Ming, mutevedzeri womutungamiriri Feng Wei, Xie Guorong, Dongxu Ming , báo Shili, ari Board nevatungamiri Shenpei Nhema, Secretary-General Jiang Lan kuzopindura.
(Coke sachigaro uye Tikanyatsoongorora musangano vechikamu ruzivo)
Musangano sachigaro ne mwedzi kuti kutenderera purezidhendi Dong Xuming, Dongxu Ming, mutevedzeri womutungamiriri chepamusoro uye mabhizimisi kukura kwayo sumo, uriri Lan Investment Co., Ltd. ndiye zvokutenga Real Estate mari nyanzvi mubhizimisi makambani, mari nzvimbo zvinosanganisira pamusika nachiremba, mumaguta zvivako, hotels, Apartments, tourism, zvivako uye zvimwe zvinogona chaizvoizvo vevaGiriki kukura uye kushandiswa. Dzinenge siyana mari, kusanganisira anazvo, vadyi asingashumbi, vakabata, Nokutendeka ndokuinama kudzoka upfumi. Bai Lan International Jewelry Lake City inobva mativi zuva romuchato, pakatanga Hong Kong Jewelry Manufacturers anenge 20 'chinoumba nhengo, sezvo yakaitwa Hong Kong kupinda yakaoma zvishongo vanoratidza, rokutengesa pahwindo uye kudyidzana pakati dzakawanda uye mudzimba pezvitsiga dzomutengo chishongo mutsetse anenge 10 kwose kugadziriswa.
Munyori General Jiang Lan pfupiso basa kuitwa April uye May basa urongwa. Kuti usimbise kutaurirana Links nhengo zviyero, kusimudzira upfumi pamwe uye exchanges pakati nhengo makambani, wedzera mabhizimisi kutsanya kukura, kugadzirira kuti sangano iri May pakutanga "nhengo Makambani kusimudzira kukura zvokutsinhanisa" mabasa, vadzidzi vaiva purezidhendi wacho nhamba zviitiko, screenings, zvakadai sei kukudziridza bhizimisi vakanga zvakurukurwa.
(Secretary-General Jiang Lan pfupiso basa kuitwa April uye May Work Plan)
Pamusangano, ivo Chamber of Commerce sei tiite anoyamura mabasa kuongorora, Dongxu Ming, sachigaro kuzozvidzorerwa Charity Fund $ 10,000. Zvadaro kudzidza sei kukwezva vapfumi vagadziri muna Ningbo Hangzhou.
Pakupedzisira, Coke, purezidhendi April 19, kupfuura dzakatevedzana mabasa kuongorora 姚大岚 muguta, kuronga mitambo kusimbisa yemberi yakachengeteka kutanga. The mutevedzeri womutungamiriri zvose kutaura maonero avo, rimwe gore pashure zvakanzi aronga kuronga kudzokera Hangzhou musha Tours.